Britain oo ka digtay suurtagalnimada weeraro argagaxiso oo ka dhaca Kenya – SBC
Britain oo ka digtay suurtagalnimada weeraro argagaxiso oo ka dhaca Kenya
Warka ka soo baxay dowlada Britian ayaa lagu sheegay in ay jirto khatar aragagaxiso oo la xiriirta in dalka Kenya ay ka dhacaan weeraro argagaxiso oo aad u xoogan kuwaasi oo lagu bartilmaameedsado Caasimada Kenya ee Nairobi.
Wasaarada Arimaha dibada ee wadanka Britain war saxaafadeed ka soo baxay ayaa lagu sheegay in goobaha lagu iskugu yimaado amaankooda la adkeeyo iyada oo laga taxadarayo khatarta argagaxiso eek u soo fool leh wadanka Kenya
Warka ayaa waxaa uu intaas ku darayaa in dowlada Britian wasaaradeeda arimaha dibada ay uga digtay muwaadiniintee ku sugan Kenya inay muujiyaan taxadar iyo is ilaalin dheeraad ah oo la xiriirta weerarada soo fool leh.
Dowlada Britain oo digniintan soo saartay ma sheegin cidda qorsheynaysa weerarada argagaxiso ee laga digay balse ciidamada Kenya waxay haatan dagaal xoogan kula jiraan Xarakada alshabaab ee koonfurta soomaaliya
goobaha laga cabsi qabo in laga geysto weeraradan argagaxiso waxaa lagu sheegay goobaha la iskugu yimaado sida goobaha socdaalka hotelada goobaha laga iibsado shoping –ka iyo xeebaha loo dalxiistago.
Dowlada Kenya horey ayay dadka dalkeeda u siisay digniin la xiriirta weeraro argagaxiso laga geysto gudaha wadanka Kenya kuwaasi oo khatar geli karan muwadininta dalkeeda iyo kuwa ajanabiga ahba.
Dhinaca kale dowlada Kenya ayaa waxaa ay rumeysan tahay in weeraro dalkeeda lagu soo qaado ay uga iman karto Alshabaab oo ay kula dagaalmeyso Gobolada Dalka soomaaliya qaarkood oo ay dulaan ku soo qaaday bishii October ee sannadkii tagey.